तपाईंलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पहिलो नायक को ? भन्ने प्रश्न गरियो भने जिब्रो लर्बराउँछ । चलचित्र क्षेत्रलाई नजिकबाट चिनेकाहरूले मात्र पहिलो नायकको नाम भन्न सक्छन्, 'शिवशंकर मानन्धर ।'
हो, शिवशंकर नेपाली चलचित्र क्षेत्रका पहिलो अभिनेता हुन् । २०२२ सालमा बनेको 'आमा' चलचित्रमा शिवशंकर मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसैले शिवशंकरलाई आधिकारिक रूपमा नै पहिलो नायक मानिन्छ ।
'आमा'भन्दा अगाडि पनि नेपाली भाषाको चलचित्र बनेको थियो, 'हरिश्चन्द्र' तर यस चलचित्रको सम्पूर्ण काम भारतमा नै गरिएको थियो । त्यसैले उक्त चलचित्रका कलाकारलाई नेपालको पहिलो कलाकार मानिएन ।
पहिलो नायकको उपाधि पाएका शिवशंकर 'आमा'पछि चलचित्रमा देखिएनन् । शिवशंकरपछि अन्य नायकहरू जन्मिए- सल्यान केसी, विश्व बस्नेत तथा सीपी लोहनी ।
सल्यानले 'मनको बाँध', 'कुमारी' जस्ता चलचित्रमा काम गरेपछि केही समय चर्चामा रहे । 'सिन्दूर'मा काम गरेपछि विश्व बस्नेत चिनिए । 'माइतीघर'बाट सीपी लोहनीको परिचय बन्यो । तर, उनीहरूले त्यस समयमा स्टारडम भने बनाउन सकेनन् ।
यस्तैमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले २ अभिनेता पायो- शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी ।
सन् १९८२ मा निर्माण भएको चलचित्र 'जीवनरेखा'बाट अभिनेता शिव श्रेष्ठले चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरे । पहिलो चलचित्रबाट नै शिवको चर्चा भयो । 'बदलिँदो आकाश', 'कान्छी'लगायत चलचित्रबाट शिवले गतिलो परिचय बनाए ।
भुवन केसीले पनि सन् १९८३ मा 'जुनी'बाट डेब्यु मारे । चकलेटी अनुहार भएका भुवनलाई दर्शकले रुचाए ।
रजत जयन्ती मनाउने पहिलो चलचित्र 'कुसुमे रुमाल'मा भुवन केसी नै मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए । उक्त चलचित्रबाट भुवनले धेरै शुभचिन्तक कमाए ।
शिवलाई दर्शकले एक्सनमा रुचाइरहेका थिए, भुवन रोमान्टिक चलचित्रमा जमे । यी २ अभिनेताले लामो समय चलचित्र क्षेत्रलाई आफ्नो पक्कडमा राखे ।
सन् १९९१ मा चलचित्र क्षेत्रमा जम्दै गरेका यी दुवै नायकलाई टक्कर दिन आइपुगे, राजेश हमाल । चलचित्र 'युगदेखि युगसम्म'बाट डेब्यु गरेका राजेशले चलचित्र क्षेत्रको एक युग नै धाने ।
अग्लो कद, लामो कपाल, मिलेको ज्यान, मन्द मुस्कान, यी र यस्तै विशेषताका कारण राजेशले पहिलो चलचित्रबाट नै आफूलाई स्थापति गर्न सफल रहे । र, लामो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राज गरे ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्टारडमको परिचय नै राजेशले दिएका हुन् भन्दा फरक नपर्ला । किनभने, कुनै समय यस्तो आएको थियो- पोस्टरमा राजेशको टाउको राखेको भरमा चलचित्र बिक्थ्यो । यस्तो क्रेज राजेश अगाडिका नायकहरूले बनाउन सकेका थिएनन् ।
राजेश हिट भइरहेको समय एउटा विवाद चर्कियो- 'धिरेन शाक्यले राजेश हमाललाई चिन्दैनन् ।'
सन् १९९४ मा बनेको चलचित्र 'कर्जा'बाट धिरेन शाक्य चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । सुन्दर लुक्स र सुगठित शरीर भएका कारण धिरेनलाई पनि दर्शकले रुचाएका थिए ।
धिरेनको करिअर ग्राफ उकालो लागिरहेको समयमा राजेशसँग धिरेनको नाम जोडिन थाल्यो । उनीहरूलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीको उपमा दिइयो ।
सोही समय धिरेनले राजेशलाई नचिन्ने गसिप बन्यो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासमा यो नै पहिलो गसिप थियो, जुन अहिलेसम्म पनि चर्चामा छ । तर, उनीहरूले यस कुरालाई 'हावा' भन्दै टारिरहेका छन् ।
धिरेनले आफ्नो स्टारडम राजेशको स्थानमा पुर्‍याउन सकेनन् । राजेशको जस्तै टाउको धिरेनको बिकेन ।
राजेशकै समयमा सरोज खनाल पनि नायकको रूपमा स्थापित हुँदै थिए । सरोजले पनि राजेशको जस्तो स्टारडम बनाउन त सकेनन् तर अभिनयको हिसाबमा भने सरोजले धेरै शुभचिन्तक कमाएका छन् ।
राजेशभन्दा अगाडि नै अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ चलचित्र क्षेत्रमा आइसकेका थिए । सन् १९८९ मा निर्माण भएको चलचित्र 'भुमरी'बाट श्रीकृष्णले डेब्यु गरेका थिए ।
बीचमा ५ वर्ष उनी चलचित्र क्षेत्रमा देखिएनन् । उनी फर्किएर आउँदा चलचित्र क्षेत्रमा राजेश हावी भइसकेका थिए । तर, पनि श्रीकृष्णले आफ्नो फरक पहिचान बनाए, त्यो पनि नृत्यबाट ।
श्रीकृष्णभन्दा अगाडि आएका नायकहरू नृत्यमा पोख्त थिएनन् । त्यसैले श्रीकृष्णले आफूलाई नृत्यबाट चिनाए । उनको अभिनयलाई पनि दर्शकले निकै रुचाएका थिए ।
श्रीकृष्णको समयमा भिलेनरूपी डेब्यु गरेका रमेश उप्रेतीले पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका थिए । सुन्दर लुक्स भएका रमेशलाई पनि दर्शकले रुचाएका थिए ।
सन् २००० मा चलचित्र 'दर्पण छाया' रिलिज भयो । उक्त चलचित्रबाट रातरात स्टार बने, दिलीप रायमाझी ।
दिलीपले यस चलचित्रभन्दा अगाडि पनि केही चलचित्रमा काम गरिसकेका थिए । तर, यसै चलचित्रबाट दिलीपले आफ्नो परिचय बनाए । यसै चलचित्रबाट उनी चलचित्र क्षेत्रमा हावी भए ।
'क्युट फेस' भएका दिलीप पनि नृत्यमा पोख्त थिए । उनको नृत्य क्षमताको धेरैले प्रशंसा गर्थे । अभिनय पनि राम्रो गर्न सक्थे, दिलीप । त्यससँगै दिलीपको 'कमेडी पन्च' राम्रो थियो । पर्दाको 'क्युट' अनुहारले गरेको कमेडीलाई दर्शकले रुचाए ।
यो समय गसिप बन्ने गर्थ्यो- 'राजेश हमालले भन्दा दिलीप रायमाझीले बढी पारिश्रमिक लिन्छन् ... ।'
चलचित्र क्षेत्रमा दिलीप हावी हुँदै थिए । दिलीपलाई भ्याई नभ्याई थियो ।
सोही समय नयाँ हिरोले ७ तलाबाट हाम फालेको समचार छ्यापछ्याप्ती भयो । उनी थिए- निखिल उप्रेती ।
डेब्यु चलचित्र 'पिँजडा'का लागि निखिलले ७ तलाबाट हाम फालेका थिए । उक्त चलचित्रबाट नै निखिल चर्चामा रहे । एक्सनमा निखिलले नयाँ ट्रेण्ड सुरु गरे ।
'क्युट फेस' भएका निखिलले फाइट तथा स्टण्ट गरेको कुरालाई दर्शकले रुचाए । लभ स्टोरीदेखि एक्सनसम्म सुहाउने अनुहार भएका कारण निखिलको व्यस्तता अत्यधिक भइदियो । निखिलले एक्सन स्टारको आफ्नो युगमा एक्सन स्टारको उपमा पाए ।
निखिल उप्रेती अभिनित एक्सन चलचित्रहरू हिट हुँदै थिए । सोही समयमा चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका विराज भट्टलाई पनि निर्माताहरूले अगाडि सारे ।
विराजले पनि चलचित्र एक्सन गर्न थाले । विरजको मुक्का र उनको संवाद बोल्ने शैली हिट भयो । 'खुकुरी', 'अग्निपथ', 'मैदान' हुँदै 'दुर्गा'सम्म आइपुग्दा विराजले आफ्नो क्रेज बनाइसकेका थिए ।
निखिल र विराज अभिनित एक्सन चलचित्रहरू बिक्न थालेपछि धेरै एक्सन चलचित्रहरू बने । त्यस समय निखिल र विराजलाई भ्याई नभ्याई नै थियो । उनीहरूले पनि लामो समय चलचित्र क्षेत्रमा राज गरे ।
उनीहरूकै समयमा सन्दर रूप र मीठो मुस्कानका धनी रमित ढुंगानाको क्रेज पनि गज्जब नै थियो । निखिल, विराज, रमितसँगै राजेश हमाल पनि चलचित्रमा काम गर्दै थिए ।
यस्तैमा, विराज भट्टसँगै स्क्रिन शेयर गर्दै नायक आर्यन सिग्देलले चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरे । 'किस्मत'बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका आर्यनको चकलेटी अनुहारलाई दर्शकले निकै रुचाए ।
एक्सन मात्र बिकिरहेको चलचित्र क्षेत्रमा आर्यनले केही लभ स्टोरी चलचित्रहरू दिए । त्यसमा आर्यन सफल पनि भए ।
लभ स्टोरी चलचित्रमा आर्यन निकै व्यस्त भए । त्यसैले आर्यनको विकल्प खोजियो । त्यही समय चम्किए, जीवन लुइँटेल ।
'नसिव आफ्नो'बाट डेब्यु गरेका जीवन उति चर्चामा थिएनन् । तर, चलचित्र 'नाइँ नभन्नू ल'मा काम गरेपछि जीवनको क्रेज पनि बढेको थियो । जीवनले पनि राम्रो फ्यान/फलोअर्स कमाउन सफल भएका थिए ।
लभ स्टोरी चलचित्रमा केही समय आर्यन र जीवनले एकछत्र राज गरे ।
तर, समय एकनासको कहाँ रहन्थ्यो र ? आर्यन र जीवनलाई ढाल्न आइपुगे- दयाहाङ राई र सौगात मल्ल ।
'मेरो एउटा साथी छ' चलचित्रमा आर्यन मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत थिए । जीवन लुइँटेल अतिथि भूमिकामा थिए । दयाहाङ राई सहायक पात्रको रूपमा चलचित्रमा देखिएका थिए ।
आर्यन र जीवनलाई के पत्तो, आफ्नै चलचित्रमा सहायक पत्रमा काम गरेको कलाकारले आफूलाई नै पाखा लगाइदिन्छ ।
यसको श्रेय भने चलचित्र 'लुट'लाई जान्छ । 'लुट' चलिरहेको ट्रेण्डभन्दा विल्कुलै फरक शैलीमा बनेको चलचित्र थियो । यस चलचित्रमा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपीन कार्की जस्ता थिएटरबाट आएका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका थियो ।
थिएटरबाट आएका कलाकारहरूको जीवन्त अभिनय र लुटले प्रस्तुत गरेको फरक शैलीलाई दर्शकले रुचाए । त्यसैले 'अर्गानिक चलचित्र' बनाउने चलचित्रकर्मीहरूको होडबाजीमा दयाहाङ, सौगात, विपीन व्यस्त बने । खगेन्द्र लामिछानेले पनि आफ्नो फरक पहिचान बनाए- 'पशुपतिप्रसाद' चलचित्रमार्फत ।
दयाहाङ, सौगात व्यस्त बन्दै थिए । चकलेटी अनुहार पछि हटिसकेका थिए । त्यही समय भुवन केसी सुपुत्र अनमोल केसीले चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु मारे ।
चलचित्र 'होस्टल'बाट डेब्यु गरेका अनमोलले युवा पुस्ताको ध्यान खिचे । नेपाली चलचित्र हेर्न आनाकानी गर्ने युवा पुस्तालाई अनमोलले हलसम्म ताने । अनमोलको चकलेटी लुक्स धेरैले रुचाए ।
अनमोलसँगै चकलेटी अनुहारमा अभिनेता प्रदीप खड्का पनि बिक्न थाले । 'प्रेम गीत'बाट प्रदीपको निकै तारिफ भएको थियो ।
पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोबाट पल शाह र पुष्प खड्का पनि चलचित्र क्षेत्रमा हावी बनिरहेका छन् ।
यता, अर्गानिक भन्दै दयाहाङ, विपीन र सौगात बिकिरहेका छन् । चकलेटी अनुहारमा अनमोल, प्रदीप, पल, पुष्प व्यस्त छन् । यही समय हास्य विधामा नायक बनेका छन्- दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे र जितु नेपाल ।
जे होस्, पछिल्लो समय दर्शकले आफ्नो रोजाइका चलचित्र हेर्न पाएका छन् । कसैले दयाहाङ-विपीनको जनरालाई रुचाइरहेका छन् त कसैले चकलेटी अनुहार खोजिरहेका छन् । हास्यमा पनि दीपकदेखि केदारसम्म फुर्सदमा छैनन् ।
अब आगामी दिनमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कुन पुस्ता हावी होला ? हेर्दै जानुको विकल्प देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २९, २०७७, १७:३२:००